Tsamba itsva yeUNWTO kuNyika Dzayo: Kutyora Mitemo yeMafambiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Tsamba itsva yeUNWTO kuNyika Dzayo: Kutyora Mitemo yeMafambiro
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
16 min kuverenga
Munyori Mukuru weUNWTO, Zurab Pololikashvili achangoonekwa aine Mumiriri weMozambique muMadrid
Mukupindura kumushumo weUNWTO ethics officer uye tsamba yakazaruka kubva kune vaimbova vakuru vepamusoro veUNWTO, Zurab Pololikashvili akakurumidza kutumira tsamba kune ese UNWTO Member States. Akagadzirirawo wedzero yekujekesa mushumo weHR uchifunga nezvemashoko akakosha eUNWTO Ethics Officer.
Zvinoita sekunge kuri kuedza kwakasimba kuchengetedza chinzvimbo chake, uku achipomera nhema kune vaimbova vakuru vepamusoro-soro UNWTO.
Zvido zvekupererwa zvinotungamira kumabasa akashata kune Secretary General weUNWTO Zurab Pololikashvili
Aka ndekekutanga Secretary-General weUNWTO Zurab Pololikashvili achipindura kana kupindura eTurboNews chinyorwa.
Mhinduro yake haina kuenda kumupepeti, asi kune ese UNWTO Nhengo dzeNyika. Tsamba yake ine addendum yakatumirwa neChishanu, mazuva mashoma pamberi pevhoti yakavanzika yakakakavadzana yakagadzirirwa kusarudza zvakare Pololikashvili kune imwe nguva seUNWTO Secretary-General. Vhoti yakarongerwa Zvita 3 panguva iri kuuya UNWTO General Assembly muMadrid.
Munyori Mukuru aive "achiedza kujekesa" mazwi akakosha akataurwa neUNWTO Ethics Officer mumushumo kuUNWTO General Assembly uye tsamba yakavhurika yakatumirwa nevaimbova vakuru vepamusoro-soro veUNWTO pamusoro peEthics Officers vanoshuma nezvetsika nemaitiro ehutungamiriri. UNWTO.
Izvi zvakateverwa nedanho rakatorwa neCosta Rica rekukumbira vhoti yakavanzika yeUNWTO iri kuuya yekunzwa kunzwa kwekugadzwazve kweMunyori Mukuru.
Zurab Pololikashvili anonzwa zvakajeka pasi pekutyisidzirwa kwekusakwanisa kuchengetedza temu yake yechipiri seUNWTO Munyori Mukuru.
Recent History uye References:
Nei Munyori Mukuru weUNWTO, Zurab Polokashvili asina kumbobvira asarudzwa zvakanaka…
Costa Rica Gurukota rezvekushanya hombe Danho reiyo UNWTO Nyowani…
Nei Sarudzo dzeUNWTO Dzichifanirwa Kuve Dambudziko Nekukurumidza…
Tsamba Yechipiri Yakavhurika neVakuru veUNWTO Vakuru Kukurudzira…
Nhume dzemuMadrid dzakakoka kuUNWTO Chiokomuhomwe…
Ramangwana reUNWTO Rakaumbwa neSaudi Arabia neSpain: Nyowani…
UNWTO ndeye Secretary-General: Yakarasika mu…
UNWTO General Assembly ikozvino muMadrid: Zurab…
UNWTO inotamira kuSaudi Arabia ichiri Kubata: Secretary-General…
Kana Muchinda weSaudi Crown uye Spanish PM vachitaura nezvazvo…
Kuvenga kweUNWTO kweWTTC Kunosanganisira Rudo rwakashongedzwa…
Kupomera Munyori Mukuru weUNWTO kunomuita mutongi…
Mutsamba yake, Pololikashvili inonyora kuti pasi pekutonga kwevaimbova vamiririri veUNWTO, kukanganisa kwakaitwa.
Nekudaro, hapana kana imwe yegore negore yekuongorora yakagadziriswa nevaongorori kubva kuUNWTO Nhengo dzeNyika chero zvisizvo zvakambotaurwa.
Kureva kwake mutsamba ichangoburwa kunhengo dzenhengo kupomera kwenhema kune vaimbove maneja nevashandi, uye chiratidzo chenzira iyo Zurab anga achipomera vaimbove maneja nevashandi kubva paakatora chigaro.
Izvi zvakagadzira mamiriro ezvinhu akaipa kwazvo musangano uye akatanga tsika yekushungurudza uye kutyisidzirwa kwevakawanda vakanaka (vaimbova) vashandi.
Kuisa Huwori uye Kubata
Kubva Zurab Pololikashvili yakatora chigaro, UNWTO yanga ichiedza kwakawanda kuisa huwori nekunyengera, ichiita senge nzira dzese dzemukati dzinonyatsotevedzwa, semuenzaniso nekutora uye nzira dzekutenga. Zvisinei, muchokwadi, Pololikashvili akave nechokwadi chekuti makomiti ekutsvagisa uye ekutenga zvinhu kuUNWTO aingoumbwa neshamwari dzake dzakanaka, dzaizotora chero sarudzo yaaida.
Kugadzira nzvimbo yekutarisa mukati nekugadza mukuru wezvetsika wemukati kwakagadzirirwa zvakajeka kuve nekutonga kwakawanda pamusoro pekunyunyuta kunoitwa nevashandi.
Yakanga yakagadzirirwawo kutyisidzira vashandi vanoda kutaura nyaya.
Pasi pehutungamiri hwekare, paimbova nemukuru wezvetsika wekunze aive nechinzvimbo chakanyanya kusarerekera uye chakazvimirira.
Mumwedzi yekutanga ndiri muhofisi, Pololikashvili yakashandura nzira yacho kuva nzvimbo yehutsika hwemukati.
Akanzwa kuti kuburikidza nemukuru wezvetsika zvemukati zvaizova nyore kumanikidza kubvisa zvichemo kana zvichidikanwa.
Kutyisidzirwa nemushumo wemukuru wehutsika uye tsamba yakazaruka kubva kune vaimbova vakuru vakuru veUNWTO Pololikashvili vakakurumidza kutumira tsamba kune vose UNWTO Nhengo dzeNyika uye vakagadzirira kuwedzera kune HR report inofunga nezvemashoko anokosha eUNWTO Ethics Officer.
Mukuedza kwekuda kuchengetedza chinzvimbo chake, akawedzera kupomera kwenhema kune vaimbove vakuru vepamusoro-soro veUNWTO.
Tsamba yakanyorwa naSecretary-General nekuwedzera yakatambirwa nekushamisika kukuru nemakurukota ezvekushanya munyika dziri nhengo dzeUNWTO.
Ndisati ndatomboburitsa tsamba yacho, eTurboNews vakagamuchira mhinduro kubva kuvashumiri uye vatungamiri vanotungamirira munharaunda yekushanyirwa, vachiratidza kunetseka uye kunyadziswa kwekuita kwaPololikashvili.
Zvinonyadzisa kuti Pololikashvili inopomera avo vaimbova vakuru vakuru veUNWTO, kusanganisira vaviri vekare vanyori-mukuru-mukuru wekuputsa mitemo yehutsika hwevashandi vehurumende vemarudzi ose pavanenge vachisimudza kushushikana kwakakomba pamusoro pehutungamiri hutsika uye maitiro mukati meUNWTO.
Anofunga kuti kushoropodza hakubvumidzwe muUN here?
Mukuona kwePolokashvili, kuvimbika kunoratidzika kunge kwakafanana nekubvisa kutsoropodza. Ndizvo chaizvo mafungiro aya uye aya anotyisidzira manejimendi maitiro anopikisana nechero UN kukosha.
Zurab Pololikashvili akagadzirira tsamba iyi uye yekuwedzera kune mushumo weHR, asi iyo addendum izere neruzivo nezve mamiriro emari mumakore gumi apfuura.
Izvo hazvina kupa kupokana kupi nekupi kune zvinonetsa zvakasimudzwa nemukuru wezvetsika. Muchokwadi, rudzi urwu rwemhinduro runoratidza zvakajeka kuti sei mukuru wezvetsika akamuita tsinhiro dzekutsoropodza uye vaimbove vakuru vepamusoro-soro vakasarudza kutumira tsamba yavo yakavhurika.
Pololikashvili inotora chikwereti nekushandura iyo UNWTO balance sheet kubva kune yakaipa kuita yakanaka. Nekudaro, akasiya chokwadi chekuti Saudi Arabia yakabhadhara UNWTO Mamirioni mashanu emadhora kuti itange nzvimbo yedunhu UNWTO muRiyadh. Iyi 5 miriyoni Dollar iri kuwedzera kune inodhura uye kushanda kwepakati.
Idi rokuti Ethics Officer rinosanganisira mashoko anotyisa uye anotsoropodza akadaro mumushumo kuGeneral Assembly uye kuti vazhinji vaimbove vepamusoro-soro veUNWTO Vakuru vanotora danho uye vakanyora tsamba yakazaruka yakanyorerwa kunhengo dzenhengo zvinoratidza zvakajeka kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika. UNWTO.
Kutaura kwaPololikashvili kuti vaimbova vakuru veUNWTO vari kukanganisa kubatana uye kubatana kweUNWTO hazvina musoro. Kuziva kuti iye pachake kubva paakatora chigaro anga achikonzeresa kubatana nekubatana kweSangano kuti zviparadzwe nekupokana kwakawanda nemakakatanwa aakatanga.
Mukuru wezvetsika uye aimbove vakuru veUNWTO vanofanirwa kurumbidzwa nekutora danho rakafumura Zurab.
Iwe haugone kuwana pfungwa yakajeka yetsananguro yaari kuyedza kupa mutsamba yake yazvino kunhengo dzenhengo.
Iwe unongoverenga ruzha, kupomerwa kwenhema, uye kumwe kupopota, maitiro asina kukodzera kuna Secretary-General weUN Agency.
Kupindira kweUNWTO muKuitwa kweSarudzo kuri kuuya
Kunyange kusava nechokwadi pamusoro pekusimbiswa kwechipiri chePololikashvili seMunyori Mukuru weUNWTO ari kuvaka, eTurboNews vakaziva kuti vamwe vakuru veUNWTO vari kushanda nesimba nePololikashvili kuti vabatane nenhengo dzenhengo. Vanoedza kumanikidza vamiriri kana kuita zvibvumirano zvekuchengetedza mavhoti vachifarira kugadzwazve kwaPololikashvili.
Kana chimwe chinhu chinopesana nebumbiro remitemo yevashandi vehurumende pasi rose, ndiko kupindira kweiyi nzira yesarudzo yeUN. Vashandi veUNWTO vanofanirwa kugara vasina rusarura nguva dzese, kunyanya kana tasvika pasarudzo.
Kunetseka kwave kuchiratidzwawo kuti Pololikashvili ari kushingaira kuedza kufambisa zvibvumirano izvo nhengo dzenhengo dzisingakwanisi kutumira vamiririri kuGeneral Assembly muMadrid dzichabvumira dzimwe nhengo dziri pedyo nePololikashvili kuti dzivhotere panzvimbo yavo.
Masvondo maviri ari kuuya achave akakosha kune ramangwana reUNWTO uye nhungamiro inodiwa nesangano iri rinofanira kupa kuhurongwa hwekudzoreredza kushanya kwenyika.
Zvakakosha kuti nyika dzenhengo dzigare dzakasvinura uye dzichiziva zvizere nezvesarudzo dzichatorwa uye maitiro ekuvhota ari kuenderera mberi paMusangano Mukuru uri kuuya. Iyi ndiyo chete nzira inogona kuve nechokwadi chekuti General Assembly ichatanga maitiro ekuvaka kumashure yakasimba UNWTO.
Izvi zvingave mukufarira nyika dzese dziri nhengo dzeUNWTO uye masangano mazhinji, mabhizinesi, uye vashandi vanoshanda neUNWTO muchikamu chekushanya nekushanya.
Munyori Mukuru weUNWTO anofanirwa kushandira nyika dzose dziri nhengo zvakaenzana, kwete idzo chete dzinotemerwa naSecretary-General kuti dzigadzwe patsva.
Kusagona uye kushaikwa kwehukurudziro yemhando yakamiririra indasitiri munguva yakaoma kwazvo munhoroondo yedu. Zurab anga achitsiva uye asina ruremekedzo kuvanhu nemasangano aanoona seasingatsigire marongero nezvirongwa zvake muhurongwa hwekubvisa vadyidzani vagara kwenguva refu nekudaro vachinetesa UNWTO. Haana kutaura akagomara uye anototi zii! Iyo UNWTO yaikodzera zvirinani !!
Tsamba yake inosimbisa maonero ake esangano rakavharwa risingadzoreki kunze.Zvaitarisirwa kuti aite.
Hapana kutaurwa zvachose mutsamba yake nezve mushumo wemukuru wetsika inova inonyanya kurehwa netsamba yakavhurika uye igwaro reruzhinji. Hapana chikonzero nei akachengeta zuva redare repamusoro muna Ndira apo FITUR yakatamiswa kubva muna Ndira kusvika Chivabvu.
Anonyatsoziva nezve dhigirii rekunyengedza rakagadzirirwa chete kumuisa kuti asimbiswe.
Tsamba yake ndeyekutyisidzirwa kune vatsoropodzi nedzimwe nyika dziri nhengo dzinoda kumupikisa.
Iye ingwavaira uye mukundikani!
Ari kushandisa puratifomu iyi kuzvigadzirira kuve Mutungamiriri wenyika yake, Georgia.
Sei akagadza CFO kubva kuGeorgia, iyo yakananga pesvedzero pamari yeUNWTO nekuunza munhu kubva kunyika yake?
Anoenda kumatunhu madiki achiedza kuvapa chiratidzo chenyasha kana chiokomuhomwe kuti vagomuvhotera.
Rwendo rwuno anofanirwa kubviswa zvikasadaro ruzhinji rwenyika dziri nhengo dzichawana chibvumirano chemumatunhu adzo.
Panogona kuve nekubviswa kwevanhu vakawanda kwenhengo dzakakomba. UNWTO inogona kuve imwe isingashande uye isina basa UN agency, kana akasimbiswa uye achienderera mberi.
Tsamba yaZurab Pololikashvili inotaurwa nezvayo mune ino chinyorwa:
Madrid, 19 Mbudzi 2021
Dzinodiwa Nyika dzenhengo,
Ndinovimba kuti kutaurirana kwangu kuchakuwanai zvakanaka. Ndine rukudzo rwekutaura nemi kuti ndikuzivisei kuti ndiri kusuwa zvikuru nekutaurirana kwazvino kwakaitwa nevaimbove nhengo dzeUNWTO dzakaburitswa pane dzimwe nhepfenyuro. Panguva iyo chikamu chese chekushanya chiri kunetsekana nemhedzisiro yedenda uye World Tourism Organisation iri kudaidzira kubatana nekubatana, basa rayo riri kugara richivhiringwa nekupomerwa mhosva dzisina musoro nevaimbove vashandi vakuru veUNWTO.
Nehurombo, zvinyorwa izvi zvakaitwa kuburikidza nemabhii eruzhinji uye payoutube.com zvinodzikisira pachena uye kuvimbika kweSangano, iro riri kushanda nesimba pakugadzirira kweMusangano Mukuru uri kuuya muMadrid. Izvo zvakare zvinobata iyo UNWTO Nhengo dzeNyika dzinoda kuona Sangano rakasimba uye rakabatana, uye kubvunza kusahadzika kwekuita sarudzo kweMatumbi Ayo Anotonga. Ichi ndicho chikonzero nei ndisingachagone kunyarara zvakare uye ndinonzwa ndichisungirwa kupindura.
Kutyora mitemo yekuzvibata kwevashandi vepasi rose
Mhosva dzakaitwa nevaimbove vashandi veUNWTO dzinoodza moyo uye dzinotyisa, kunyanya, tichifunga kuti, vakashandira Sangano kwemakore, ivo, zviri nani kupfuura chero ani zvake, vanofanira kuchengetedza nekudzivirira chimiro chayo nekuvimbika. Pakugadziriswa kwehukama hwekondirakiti neUNWTO, chero mushandi, kusanganisira ini, akatsidza kusapindira zvisina kufanira muzvinhu zveSangano neizvo zveMabhodhi aro Anotonga panguva yake uye mushure mekugumiswa kwehukama hwebasa. Nehurombo, mukuvaka kuMusangano wedu Mukuru chitsidzo ichi chakatyorwa, kwete kamwe chete, asi kakawanda. Ini ndinodemba kuti kurwiswa kwakadai hakusi kungoyedza kwakasimba kunyengera uye kukanganisa maitiro ekuita sarudzo eSangano, sezvakamiswa muMitemo yayo. Zvinotonyanya kushungurudza apo panguva yevaimbova vamiriri veUNWTO, vakasaina tsamba yakavhurika, zvisizvo zvakaitwa uye mazhinji akakosha Nhengo dzeNyika dzakabuda, mamiriro ayo Sangano anga achiedza kugadzirisa kubva panguva iyoyo.
Kufuratira uchangamire hweDare Rinodzora
Maitirwo esarudzo uye hurongwa hwekudomwa neDare reMutungamiriri wemumiriri kuti aunzwe kuGeneral Assembly zvinowira mukati meiyo Executive Council pachayo. Yakataurwa maitiro uye nguva, yakagamuchirwa neMutungamiriri weKanzuru pamusangano wayo we112th, pamwe chete nezuva uye nzvimbo yemusangano we113th, zvakateverwa uye zvakatevedzwa zvizere neSecretariat, kusanganisira kugamuchirwa, kuvhura uye kuongorora zvikumbiro, maitiro akaitwa. mukubatana kwepedyo neMumiriri weSachigaro wechikamu che113 che Executive Council.
Kudhakisa kuburikidza nenhepfenyuro
Uyezve, UNWTO ine rekodhi yezviito zvepamutemo zvakatangwa kupesana nevezvenhau vakasarudzwa zvekushandisa zvisiri pamutemo uye zvisina kutenderwa kwezviratidzo zveUNWTO (2017), zvinyorwa zvisingabvumirwe uye kuburitswa kwezvikamu zveUNWTO Rinodzora Bodies (2017-2018); uye kusvibisa zita pamusoro pevashandi veSangano vasingabate mabasa ehurumende (2019).
Panguva ino ini ndine basa rekuchengeta imwe yeruzivo pasi pemvumo yepamutemo, kudzivirira kukanganisa kutongwa kuri kuitika kwakatangwa muna 2018 vachipokana nevamwe vakasaina tsamba uye kuchengetedza mukurumbira weSangano. Izvi zvakatanga mushure mekuongorora kwekutanga kwakaitwa nesangano rekunze, KPMG, pachikumbiro changu pandakapinda chigaro, kuitira kuti ndione nzira dzekugadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemari kweSangano, izvo zvakakanganisa basa reUNWTO kuNhengo dzaro uye kuzadzisa. basa rayo.
Sarudzo yedzimwe Nhengo dzeNyika dzekutaurirana pasina divi kuburikidza neimwe nhepfenyuro inonyanya kunetsa. UNWTO isangano rako, rinoshandira Nhengo dzayo, uye rinogara rakavhurika kune chero tsananguro inoratidzwa nenzira yakakodzera neNyika dzayo Nhengo, sekupihwa kwechibvumirano cheUNWTO. Kutendeseka kwevose uye maitiro ekuita sarudzo kuburikidza neDare Rinodzora randinokurudzira kuremekedzwa. Sezvakarongwa muMitemo yeSangano, idzo dzakatevedzwa neNyika dzose dzeSangano, idzi ndidzo nhandare dzakakodzera dzokukakavadzana nokukurukura nyaya dzesangano neMitezo yose yeSangano. Uyu musimboti wakakosha kuona kushanda chaiko kwenhengo nemaitiro adzo ekuita sarudzo pamwe nezvido uye chimiro chesangano cheSangano.
Nezvekupomerwa kusina hwaro, ndinoshuvira kukwevera pfungwa dzako kune tsananguro dzakapihwa neSecretariat muwedzero yegwaro A/24/5(c) rakaunzwa kuti ritariswe neGeneral Assembly. Iwe uchawana ruzivo rwese rwunodiwa maererano nekuedza kusati kwamboitwa kubva 2018 kusimbisa zvishoma nezvishoma kubuda pachena uye kuzvidavirira kweSangano uye kumisikidza basa rekutarisa remukati iro gore ra2018 risati rawana rutsigiro rwaidiwa neManejimendi apfuura.
Dzinodiwa Nhengo dzeNyika, ndapota gamuchirai vimbiso dzekutarisisa kwangu kwakanyanya.
AMENDMENT UNWTO INOPIWA MUAKERO KUNHENGO DZENYIKA